Ungayishintsha kanjani inombolo kuTelegram egcina umlando wethu | Izindaba zamagajethi
Ungazishintsha kanjani izinombolo kuTelegram egcina umlando wethu
Akuzona izindaba ukuthi ngingumvikeli oqinile wohlelo lokusebenza lwemiyalezo yeTelegram. Kwirekhodi, akukhona ukuthi ngiphikisana nanoma ngubani, kepha ngoba kunginikeza imisebenzi eminingi ewusizo kakhulu kunaleyo embalwa, ngoba zimbalwa kakhulu izinketho ze-WhatsApp. Ukuqala, iTelegram inesicelo sedeskithophu nethebhulethi, kungaba i-iPad noma i-Android. Lesi sici sokugcina sibaluleke kakhulu uma ungomunye wabantu abavame ukufika ekhaya cishe bengenalo ibhethri ocingweni noma sezizophela, ngoba kusivumela ukuthi silandele izingxoxo zethu ngokusebenzisa ithebhulethi yethu ngokunethezeka ngenkathi sibuka i-TV futhi idivayisi yethu ishaja ekamelweni.
Okunye okuhle okubalulekile enakho, uma kuqhathaniswa nomncintiswano, ukukwazi ukudala izingxoxo eziyimfihlo nezizimele lapho singenza khona ukuqedwa kwemiyalezo esiyibhala esikhathini esisimisile. Enye inzuzo esingeke sayikhohlwa yi- ukuvumelanisa phakathi kwamadivayisi wazo zonke izingxoxo zethu, amavidiyo nezithombe. Usuku i-WhatsApp ehlupha ngalo ukwenza uhlelo lokusebenza lwedeskithophu, ngicabanga ukuthi kuzobe sekwephuze kakhulu, ngoba abasebenzisi abanezi zidingo bazobe sebevele bafuna ezinye izindlela njengoba kunjalo kimi.
Inketho entsha isicelo esisanda kuyithola kusibuyekezo sayo sokugcina kungenzeka hambisa zonke izingxoxo zethu kwenye inombolo yocingo ngaphandle kokulahlekelwa yimininingwane. Ukusebenza kwale sevisi kuyefana nokwenziwa lapho idatha ivumelanisiwe phakathi kwamadivayisi, ngakho-ke akuyona inqubo eyinkimbinkimbi.
Shintsha inombolo egcina umlando wethu
Okokuqala siya esigabeni Sezilungiselelo zohlelo lokusebenza.
Ngokulandelayo siya ku- Inombolo yocingo. Lapha iTelegram izosazisa ngenqubo ezokwenziwa bese uchofoza ku-Change number. I-Telegram izokhombisa lo mlayezo olandelayo: Bonke oxhumana nabo beTelegram bazofaka inombolo yakho ezincwadini zabo zokuxhumana, inqobo nje uma benenombolo yakho endala futhi ungazange uyivimbe kuTelegram. Lokho wukuthi, oxhumana nabo bazothola inombolo yakho entsha yefoni, basisindise umsebenzi oyisidina wokuhamba ngamunye ngamunye wazise ngoshintsho. Chofoza ku-ok.
Manje kufanele faka inombolo yethu yocingo lapho sizothola khona ikhodi yokuqinisekisa. Uma selutholakele, uhlelo lokusebenza luzoluthola bese luqala ukulanda okuqukethwe kusuka kunombolo yethu yocingo yakudala kuya kokusha.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » Ungazishintsha kanjani izinombolo kuTelegram egcina umlando wethu
Ngishintshe inombolo yami ngeyomngani, manje sesihlanganise inyoni futhi sinabo oxhumana nabo be-2, oxhumana nabo abayeki ukukhula, izinombolo engicabanga ukuthi sinazo ngokufanayo azisalibonisi igama ku-whatsapp, njll ... ngingenza ukuhlehlisa engikwenzile ??
U-Ignacio Lopez kusho
Ngokwenza le nqubo, iTelegram iphethe ukukopisha yonke i-ajenda kusuka enombolweni eyodwa iye kwenye. Okufanele ukwenze ukushintsha inombolo yocingo futhi kusuka ku-terminal lapho ukwenze khona kwenye inombolo yocingo. Uma unamatheminali amabili ahlobene nenombolo yocingo efanayo, womabili amadivayisi azothola imilayezo efanayo, njengoba kuyinsizakalo ye-multiplatform.
Uma futhi unohlelo lokusebenza olufakiwe kwi-iPad noma kukhompyutha, lawa madivayisi azothola nemilayezo.
Sawubona, ngithemba ukuthi othile angangiphendula !!!… Umakhalekhukhwini wami untshontshiwe futhi ngisenayo i-akhawunti kwi-PC yami .. Ngikwazile ukuphuma esitokisini, kodwa lapho ngizama ukushintsha inombolo yocingo, akunakwenzeka… i-PC yami ine-linuxmint yesistimu yokusebenza… noma yimiphi imibono ???… gratzie111
Sawubona, uxolo, ungayxazulula? ?
UMirian Kuwata kusho
Sawubona, ungangisiza, bengikwelinye izwe isikhashana, ngabuyela ezweni lami futhi yocingo lwami lwabhaliswa ngaleyo nombolo lapho ngibuyisa umakhalekhukhwini wami, zonke izicelo zasuswa lapho ngiphinda ngizilanda futhi ngazithola kabusha, bengifuna ukuphinde ngibakhombe ngenombolo yakwamanye amazwe ngoba bengingafuni ukulahlekelwa ngumlando wami kuphela ukuthi bekungenakwenzeka ngoba ingibuze ikhodi yokuqinisekisa, ngabe kukhona umuntu ongangitshela ukuthi ngingawuthola kanjani umlando wami kusuka kunombolo endala?
Ngiyabonga kakhulu ngokunaka kwakho! Ngilinde ngijabule
Phendula uMirian Kuwata
Loraine castro kusho
Sawubona okuhle ngithemba ukuthi ungangisiza ngokungathí sina. Ngifuna ukubuyisa i-akhawunti yami yocingo engingayisebenzisi cishe unyaka wonke, kepha angisenayo inombolo yami endala yocingo, kungenzeka yini ukuthola izingxoxo zami noxhumana nabo? Uma kukhona owaziyo sicela usize !!
Phendula ku-Loraine castro
Sawubona, ngifuna ukwazi, uma ngiguqula inombolo yami kamakhalekhukhwini ku-telegram, ingabe inombolo eyedlule izokwazi ukufinyelela engixhumana nabo nezingxoxo zami?
Sanibonani nonke. Ngifuna ukushintsha inombolo kamakhalekhukhwini ngoba angisayisebenzisi futhi iTelegram ithi kimi: «Ngenxa yezizathu zokuphepha, awukwazi ukushintsha inombolo yocingo kusuka kudivayisi esanda kuxhunywa. Sicela usebenzise uxhumano oludala noma ulinde amahora ambalwa ». Ngakho-ke ngiyishintsha kanjani inombolo? Sengizame kaningana hhayi lutho. Ngineseshini yewebhu eqale ngenombolo endala futhi ayingivumeli ngiyishintshe ukusuka lapho ... Ngiyabonga
Sawubona, ukwenzile? Kungani nami nginayo leyo nkinga!?
Amathuluzi ama-5 wokulungisa amafayela we-AVI akhohlakele kusuka ku-Windows
I-CMD: Imiyalo emi-5 ebalulekile ku-Windows obungayazi